မူဆယ်မြို့နှင့် ကျိုင်းတုံမြို့တုိ့၌ ပြစ်ဒဏ်ကျခံပြီး ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသည့် တရုတ်နိုင်?? - Yangon Media Group
ပြစ်ဒဏ်ကျခံရာမှ ပြန်လည်လွတ်မြောက်ခဲ့သည့် တရုတ် နိုင်ငံသား နှစ်ဦးအား ဇန်နဝါရီ ၃ ရက် နံနက်က ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း) မူဆယ်မြို့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဌာနခွဲ (၇) ပြည် ဝင် ပြည်ထွက်စစ်ဆေးရေးဂိတ် (နန်း တော်ဂိတ်)၌ တရုတ်နိုင်ငံတာဝန်ရှိသူများ ထံ စနစ်တကျပြည်နှင်လွှဲပြောင်းပေးအပ် ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပြစ်ဒဏ်ကျခံလွတ်မြောက်ခဲ့သော တရုတ်နိုင်ငံသားများဖြစ်သော MA HEL MEI နှင့် HE HON GBO တို့အား လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များနှင့်အညီ Black List ရေးသွင်းပြီး မူဆယ်မြို့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုး သားမှတ်ပုံတင်ရေးဌာနခွဲ (၇) နှစ်နိုင်ငံ ပြည်ဝင်ပြည်ထွက်စစ်ဆေးရေးဂိတ် (နန်းတော်ဂိတ်)၌ မူဆယ်မြို့နယ် လူဝင် မှုကြီးကြပ်ရေးမှူး ဦးဝင်းနိုင်က တရုတ် နိုင်ငံ ရွှေလီနယ်စပ်ကာကွယ်ရေးဌာန စစ်ဆေးရေးအရာရှိ Mr. ZHOO HEN နှင့် Mr. CHAUK YA HOPE တို့ထံသို့ စနစ်တကျလွှဲပြောင်းပေးအပ် ပြည်နှင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံသား MA HEL MEI အား ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၄ရက်က အမှတ် (၂၄) မူးယစ်တပ်ဖွဲ့စု (လားရှိုး)က မူးယစ်မှုဖြင့် ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး လားရှိုးအကျဉ်းထောင်၌ ပြစ် ဒဏ်ကျခံရကာ HE HON GBO မှာ ၂ဝ၁၆ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၇ ရက်က မြန်မာ-ထိုင်းအမှတ် (၁) ချစ်ကြည် ရေးတံတားပေါ်၌ လုယက်မှုဖြင့်တာချီ လိတ်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ဖမ်းဆီး ၍ ကျိုင်းတုံအကျဉ်းထောင်၌ ပြစ်ဒဏ် ကျခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုအခါ ၎င်းတို့နှစ်ဦးသည် ပြစ် ဒဏ်ကျခံခဲ့ရပြီး လွတ်မြောက်လာသည့် အတွက် မူဆယ်မြို့နယ် လူဝင်မှုကြီးကြပ် ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနမှ တရုတ်နိုင်ငံမှ တာဝန်ရှိသူများထံစနစ် တကျ လွှဲပြောင်းပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်သို့ ဖရဲ၊သခွား တင်ပို့ရာတွင် အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်နေသည့် စိုက်ပျိုးတောင်သူများ ဆန္ဒရှိပ?
မွန်ပြည်နယ်အတွင်း လမ်းခင်းကျောက် ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းလိုင်စင် အသစ်များ ထုတ်ပေးတော့မည် မ??
ဘဝမှာ တစ်ကြိမ်သာရရှိမယ့် အခွင့်အရေး